Echiche Idee Ink Na-ewu Eke Echiche maka Gị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Echiche Ink Tattoo Ink maka Gị
1. Egwuregwu na-egbu egbu na-eme ka nwoke dị mma
Mmadụ na-enwe mmasị ịnwe Eke Ọkụ n'elu igbe dị n'elu ya na ejiji ink ojii. Nke a na-enye anya dị mma
2. Ụgbụ ịnyịnya na azụ na -eme ihe eji agba aja aja na-eme ka nwoke dị mma
Ndị mmadụ na-enwe mmasị imepụta akpịrị ejiji na azụ na-eji ncha ink na-acha aja aja. Nke a na-enye ndị mmadụ ezigbo mma.
3. Eke azu n'ubu na-eweta anya nke na-adọrọ adọrọ
4. Eke egbuo na ogwe aka dị elu na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
5. Ụdị ejiji na-acha akwụkwọ ndụ na-acha odo odo na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-eme ka nwanyị mara mma
Ụmụ nwanyị na-ahụ aja nchara na-acha aja aja na-acha akwụkwọ ndụ na-acha odo odo na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ; egbu egbu egbu egbu a na-eme ka ha dị egwu
6. Ụdị Ịnyịnya n'elu akpa dị elu na-eme ka mmadụ nwee ọdịdị mara mma
Ndị ikom dị ka Epeepe Ọkụ n'elu akpa ha na ejiji ink ojii. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha nwee ọdịdị dị ebube
7. Ụgbụ e ji egbu egbu maka ubu na-eme ka ụmụ agbọghọ mara anya
Ụmụ agbọghọ, na-eji uwe na-acha aka na-acha aka na-aga maka akara onyinya na ubu ha na-acha odo odo na nke oroma na-acha odo odo ma na-acha odo odo iji weta ndị mmadụ n'ihu ọha
8. Ụdị ejiji na-acha odo odo, na ogwe aka ekpe aka na-eme ka ọkpụkpụ ahụ pụta na ụmụ nwoke
Ndị mmadụ na-enwe mmasị ịnwe Egbu Ọcha na ogwe aka ekpe. Ejiji egbu egbu a na-acha odo odo, nke na-enye ha ọdịdị ahụ
9. Eke egbuo n'apata ụkwụ na-enye ụmụ agbọghọ ahụ anya mara mma
10. Eke egbuo n'akụkụ na-eme ka nwanyị mara mma
Ụmụ nwanyị na-ahụ Ụdị Ọcha n'akụkụ n'akụkụ ya na-eji ejiji onk; egbu egbu egbu egbu a na-eme ka ha dị egwu
11. Eke egbuo na ejiji ink ojii na-eme ka anya mara mma
Ụmụ nwanyị Brown ga-ahụ Ụdị Ọcha na ejiji onk; ihe a na-egbu egbu na-emetụta akpụkpọ ahụ ha iji mee ka ha yie ihe dị mma ma mara mma
12. Ụgbụ na-egbu egbu nke ubu na-eme ka mmadụ bụrụ onye nzuzu
Ụgbụ a na-acha anụnụ anụnụ na-acha akwụkwọ ndụ pink ink na-emetụta akpụkpọ anụ nke onye na-acha aja aja. Ntucha egbu egbu a ga-eme ka nwoke ahụ gbanwee ma ọ bụ na ọ ga-eme ya
13. Ụdị ejiji na-eji ejiji ink na-acha uhie uhie iji mee ka anya nwoke na-atụgharị anya.
Ndị ikom na-eyi uwe elu na-achaghị aka ga-enwe mmasị ịga maka tattoo ịnyịnya na-eji ejiji ink na-acha aja aja iji mee ka ndị ọzọ mara ya ma nye ha anya mara mma.
14. Ụgbụ na-egbu egbu nke ubu na-eme ka mmadụ bụrụ onye nzuzu
Ụdị ejiji a na-eji oji ink na-acha akpụkpọ anụ. Ntucha egbu egbu a ga-eme ka nwoke ahụ gbanwee ma ọ bụ na ọ ga-eme ya
15. Ụgbụ na-agba ịnyịnya na ụkwụ na-eme ka ndị inyom mara mma.
Ụdị ịnyịnya na ụkwụ na-eme ka ụmụ nwanyị mara mma ma na-adọrọ mmasị ndị mmadụ.
16. Ụdị ejiji na-acha anụnụ anụnụ na-eme ka nwoke dị mma
Mmadụ na-enwe mmasị ịnwe Eke Ọkụ na ejiji anụnụ anụnụ. Nke a na-enye anya dị mma
17. Ụgbụ ịnyịnya na apata ụkwụ na-eme ka ụmụ agbọghọ nwee anya dị mma
18. Ụgbụ ịnyịnya na ụkwụ na-eweta anya nwanyi
Ụmụ agbọghọ na-ahụ Ọmarịcha ejiji na ụkwụ. Nke a na-egbuke egbuke egbu egbu na-eme ka ha mara mma
19. Eke egbuo na ubu ya na ejiji onk na-eme ka mmadu ghara ile anya
Ụdị ịnyịnya a na ubu ya na ejiji ink nke oji na-emetụta akpụkpọ ahụ na-acha aja aja. Ntucha egbu egbu a ga-eme ka nwoke ahụ gbanwee ma ọ bụ na ọ ga-eme ya
20. Eke egbuo n'apata ụkwụ na-enye ụmụ agbọghọ ahụ anya mara mma
21. Eke egbuo maka apata ụkwụ na-eme ka anya nwanyi ha
Ụmụ agbọghọ dị ka Ụcha Egwu mara mma n'akụkụ ụkwụ ha. Ụdị egbu egbu a mara mma ma mee ka àgwà ụmụ nwanyị dịkwuo mma.
22. Eke egbuo na apata ụkwụ ya na ejiji ink na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
23. Eke egbuo n'apata ụkwụ na-eme ka nwanyị mara mma
Ụmụ nwanyị na-ahụ ụdị egbugbu n'apịtị ụkwụ; egbu egbu egbu egbu a na-eme ka ha dị egwu
24. Eke egbuo na akụkụ ya na -emepụta ink nke pink na-eweta ọmarịcha anya
ndị mmụọ oziegbu egbu hennaụmụnne mgbuegbu egbu osisi lotusagbụrụ ebondị na-egbuke egbukeenyi kacha mma enyizodiac akara akaraegbu egbu egbukoi ika tattooegbu egbu ebighi ebiechiche egbugbuGeometric Tattoosegbu egbu okpuna-adọ aka mmaaka akaudara okooko osisingwusi pusiegbu egbu diamondakwara obiUche obiegbugbu maka ụmụ agbọghọnnụnụegbu egbuakpị akpịọdụm ọdụmna-egbu egbuakara ntụpọEgwu ugookpueze okpuezen'olu oluegbugbu egbugburip tattoosima ima mmaegbu egbu maka ụmụ nwokemma tattoosegwu egwuenyí egbu egbumehndi imeweụkwụ akaarịlịka arịlịkaAnkle Tattoosazụ azụaka mma akaỤdị ekpomkpaọnwa tattoosaka akadi na nwunyeegbu egbu mmiriNtuba ntughari